SAWIRO Hay’adaha gar gaarka &wasaradda Gar gaarka Maareynta iyo Masiibooyinka KGS oo Maanta Shir yeeshey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta SAWIRO Hay’adaha gar gaarka &wasaradda Gar gaarka Maareynta iyo Masiibooyinka KGS oo...
SAWIRO Hay’adaha gar gaarka &wasaradda Gar gaarka Maareynta iyo Masiibooyinka KGS oo Maanta Shir yeeshey
Shir deg deg ah oo ay wasaradda Gar gaarka Maareynta iyo Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta ay isugu yeertay Hay’adaha gar gaarka ee ka howlgala Deeganada Koonfur Galbeed ayaa Maanta ka dhacay Magaalada Baydhabo.
kullankan ayaa waxaa Shir guddominayay Wasiir ku xigeenka Gar gaarka Maareynta iyo Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulkadir Sheekh Cali Barako ujeedadiisuna waxaa ay aheyd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka Daadadka ka dhashey ee Deeganada Koonfur Galbeed uu ku hayo gaar ahaan Degmada Berdaale ee Gobolka Baay OO Hadda laga soo sheegayo Daadad la sheegey in ay saameyn ku yeesheen Bulshada Degmadaasi.
Shirka ayaa waxaa qeyb ka ahaa Wasiirk ku xigeenka Wasaradda Tamarta iyo kheyaardka Biyaha Dowlad Goboleedka KGS iyo Guddomiyaha Degmada Berdaale.
Cabullhi isaxaq (Abdullahi ganey ) Wasiir kuxigeenka wasaradda Tamarta iyo khayraadka Biyaha kgs o qeyb ka ah Wasaradiisa guddiga gurmadka Fataahadaha ee uu magacabey Madaxweynaha KGS oo madasha shirka ka hadley ayaa Hayádaha ka codsadey in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu gurmaadan Bulshada uu saameyay fatahadaha.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda gar gaarka maareynta iyo masiibooyinka Dowlad Goboleedka KGS Mudane Cabdikadir Sheekh Cali Barako ayaa Markii uu dhaamadey shirka Warbaahinta faafahin ka siiyay ujedaada shirka iyo waxyaabihii looga hadley waxana uu shaagey in ay isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gurman doono bulshada Deeganada Koonfur Galbeed ee uu saameyay fatahaadaha.